Magaalooyinka Dijitaalka ah - sida aan uga faa'iideysan karno tikniyoolajiyadaha sida waxa SIEMENS bixiso - Geofumadas
Magaalooyinka Dijitaalka ah - sida aan uga faa'iideysan karno tikniyoolajiyadaha sida waxa SIEMENS bixiso
Maarso, 2020 Engineering, tabo cusub
Wareysiga Geofumadas ee Singapore waxaa lala yeeshay Eric Chong, Madaxweynaha iyo Madaxa Shirkadda, Siemens Ltd.
Sidee ayey Siemens ugu fududaynaysaa adduunka inuu yeesho magaalooyin ka caqli badan? Waa maxay hadiyadahaaga ugu waaweyn ee oggolaanaya tan?
Magaalooyinku waxay wajahaan caqabado sababa la xiriira isbedelada ay keeneen megatrends ee magaalada, isbedelka cimilada, caalamiyeynta iyo demograafiga. Dhamaan kakanaanshahooda, waxay soo saaraan tiro aad u badan oo xog ah oo ay ku dheehantahay mega shanaad ee digitization-ka ay u isticmaali karto inay ku hesho macluumaad ayna ku wanaajiso nidaamyada taageera kaabayaasha magaalooyinka.
Siemens, waxaan kaalmaynay MindSphere, nidaamkeena qiiqa furan ee IoT ee furan, si awood loogu siiyo 'magaaladan caqliga badan'. Mindsphere waxaa loo qiimeeyay "ugu wanaagsan fasalka" madal IoT ay bixiso PAC. Kartida ay u leedahay “Open Platform-as-a-service”, waxay ka caawineysaa khubaradu sidii ay u abuuri lahaayeen xalka magaalada caqliga leh. Iyada oo loo adeegsanayo awoodeeda 'MindConnect', waxay awood u siineysaa isku xirnaanta aaminka ah ee Siemens iyo alaabada qeybta saddexaad iyo qalabka si loo qabto xog-waqtiga dhabta ah ee falanqaynta xogta weyn ee u saamaxeysa codsiyada kala duwan ee Smart Cities. Xogta laga soo uruuriyay magaalada guud ahaan sidoo kale waxay noqon kartaa fikrado loogu talagalay dadka magaalada qorsheeya iyo kuwa sameeya siyaasadaha si ay u qeexaan horumarka mustaqbalka ee magaalada caqliga leh. Iyada oo sii wadaysa horumarka garaadka iyo farshaxanka xogta, habka loo badalo xogta sinu fahamka iyo abuurista figradaha cusub ee codsiyada magaalada ee caawin kara wax ka qabashada caqabadaha magaalada ee soo ifbaxaya isbeddelada mega iyo sare u qaadista suurtagalnimada magaalo caqli badan.
Magaalooyinku miyey ku sii xeel dheer yihiin xawaaraha la doonayo? Sideed u aragtaa horumar? Sidee shirkadaha sida Siemens uga caawin karaan dardargelinta xawaaraha?
Adduunku wuxuu si aad ah ula socdaa horumarka magaalooyin caqli badan. Daneeyayaasha sida dowladda, shirkadaha kaabayaasha dhaqaalaha, iyo hogaamiyaasha wershadaha, waxay si firfircoon ugu dhaqmayaan isbedelka. Hong Kong, dawladdu waxay billowday barnaamijka 'Smart City Blueprint' ee ugu fiican sannadka 2017, kaas oo dejiyey himilo loogu talagalay horumarinta Smart City oo leh Blueprint 2.0 jidka. Ka sokow dejinta tilmaamo cad oo warshadaha ah, dawladdu waxay sidoo kale bixisaa dhiirigelin dhaqaale sida maalgelinta iyo dhimista cashuuraha si loo taageero horumarka iyo kala-soocista hal-abuurka mowduuca si dhakhso ah u koraya. Tan ka sii muhiimsan, waxay hogaamineysaa dadaallada magaalada ee caqliga leh sida Energizing Kowloon East, halkaas oo laga fulinayo fikradaha-fikradaha. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan gacan ka geysano khibradeena PoCs oo kale, tusaale ahaan:
Nidaamka Korjoogteynta Kerbside Upload / Download - Hal-abuurnimo si kor loogu qaado meel ku habboon miro-wax ku oolka ah iyo ka caawinta adeegsadayaasha inay marin-u-ritaan / soo-dejiso la heli karo leh AI.
Nidaamka Xogta Korantada Tamarta - Ku rakibida dareemayaasha guriga ee caqliga leh ee xogta isticmaalka waqtiga korontada si ay isticmaaleyaashu ula socdaan tabaha isticmaalka barnaamijyada mobilada si kor loogu qaado caadooyinka isticmaalka korantada.
Intaa waxaa dheer soo qaadashada khibradeena caalamiga ah, waxaan aaminsanahay inaan sidoo kale gacan ka geysan karno dhisida deegaanka dabiiciga ah ee hal abuurka. Ujeeddadan awgeed, waxaan maalgelin ku sameynay 'Smart City Digital Hub' ee Sayniska Sayniska si aan u siino meel ay ku bilowdo, khubaro tikniyoolajiyadeed, iyo bixiyeyaasha kaabayaasha si aan u dhisno boortoodiyadooda dhijitaalka ah loona horumariyo codsiyada magaalada ee caqliga leh.
Hawlaha aan ka wadno Hong Kong waxay ku celcelineysaa dadaalkeena meelo kale si aan uga caawino magaalooyinka inay noqdaan kuwa caqli badan. Tusaale ahaan, Boqortooyada Ingiriiska dhexdeeda, waxaan London kala shaqeyneynaa dhismaha 'Arc Fursad'. Waa nooc ka mid ah Smart City oo ay wado waaxyaha gaarka loo leeyahay ee gobolka iyo iyada oo lala kaashanayo Maamulka Weyn ee London, halkaas oo taxane istiraatiiji ah oo magaalada laga fulinayo iyadoo diiradda la saarayo tamarta, gaadiidka iyo dhismayaasha.
Magaalada Vienna, Austria, waxaan kala shaqeyneynaa magaalada Aspern barnaamijyada tijaabada shaybaarka casriga ah ee Smart Cities iyo nidaamyada loogu talagalay magaalooyinka caqliga leh, diiradda lagu saarayo hufnaanta tamarta iyo kaabayaasha smart iyo horumarinta xalka tamarta dib loo cusbooneysiin karo, xakamaynta griiga. korantada yar, kaydinta tamarta iyo xakamaynta caqliga leh ee shabakadaha qaybinta.
Maxaa kugu kalifay inaad asaasto xarun magaalo caqli badan oo casri ah?
Himiladeenna Xarunta Magaalada ee 'Digital City Center' waa in la dardar geliyo horumarka magaalada ee caqliga leh iyada oo loo marayo iskaashi iyo horumarin hibo leh. Waxaa soo saarey MindSphere, nidaamka IoT ee daruuraha Siemens ee daruuriga ah, xarunta waxaa loogu talagalay inay tahay sheybaar furan oo awood u siiya R&D dhismayaasha, tamarta iyo dhaqdhaqaaqa. Iyada oo la hagaajinayo isku xirnaanta IoT, xarunteena dijitaalka ah waxay ujeeddadeedu tahay inay ka caawiso daneeyayaasha sidii ay u aqoonsan lahaayeen daciifnimada magaaladeenna iyo inay taageeraan shirkadaha inay ballaariyaan meheradooda oo leh digitization.
Waxaan rajeynaynaa in xaruntu kobciso kartida mustaqbalka ee Hong Kong si ay u taageerto awooda koritaanka ee magaalada caqliga leh. Sababtaas awgeed, xaruntu waxay bilowday Akadeemiyadda Mindsphere si ay u bixiso tababbarka iyo wadashaqeynta Golaha Tababbarka Xirfadda si ay uga caawiso buuxinta baahiyaha shaqaalaha iyo dhiirrigelinta ka qaybgalayaasha warshadan.
Maxay yihiin howlaha ugu waaweyn ee xaruntan?
Xarunteena Smart City Digital Center ujeedadeedu tahay inay abuurto nidaam casri ah oo cilmiga deegaanka ah iyada oo lala kaashanayo shuraakada maxalliga ah sida bixiyeyaasha kaabayaasha, machadyada waxbarashada, iyo bilawga. Xaruntu waxay ujeedadeedu tahay inay noqoto isku xiraha si ay ula wadaagaan aqoonta ku saabsan teknoolojiyadda IoT ee horumarsan, ku dhiirrigelinta waaxaha inay u furaan xogta barnaamijyada magaalada ee caqliga leh, u soo saaraan macluumaadka aragtida guud ee kaabayaasha magaalada, iyo sahminta codsiyada magaalada. Hadafka ugu dambeeya ayaa ah in la dhiso magaalo caqli badan oo ku taal Hong Kong iyo wanaajinta nolosha iyo hufnaanta magaaladeena.
Gobolkee ayaad ku arkeysaa horumarka ugu badan ee xagga dijitaalka?
Waxaan aragnaa horumar xagga dhismaha, tamarta iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa kuwaasoo intooda badan ka faa iida digitization.
Dhismooyinku waa macaamiisha ugu muhiimsan ee tamarta magaalada, waxayna 90% koronto ka cunaan Hong Kong. Waxaa jira awood weyn oo lagu horumarinayo hufnaanta tamarta dhismaha, yareynta saamaynta ay ku leedahay deegaanka, oo si caqli gal ah loo maareeyo meel gudaha ah iyada oo loo sii marayo tikniyoolajiyadda AI-da ay ku sii kordhiso AI. Tusaale ahaan, nidaamkayaga maaraynta 'AI Chiller' wuxuu bixiyaa kormeer xaalad 24x7 ah oo ku saabsan warshadda chiller, isla markaaba wuxuu siiyaa talooyin kooxda dhismayaasha dhismayaasha si kor loogu qaado howlahooda si joogto ah. Tusaale kale waa "dhismayaasha hadli kara" oo si aan kala go 'lahayn ula xariiri kara nidaamka tamarta si ay u abuuraan jawi deegaanka oo ka jawaaba baahiyaha dhismayaasha iyo deggeneyaasha iyada oo la hubinayo in ilaha tamarta ee magaalada la isticmaalo hab hufan oo firfircoon.
Magaalo dad aad u tiro badan sida Hong Kong, waxaa jira awood weyn oo kor loogu qaado hal-abuurka dhaqdhaqaaqa caqliga leh si ay ugu suurtagasho khibrad safar oo aan xasilloonayn oo loogu talagalay deggeneyaasheeda. Casriyeynta V2X (gawaarida xamuulka ah) waxay awood u siisaa isgaarsiinta joogtada ah ee udhaxeysa gawaarida iyo kaabayaasha taageeraya codsiyada sida xalinta xakameynta caqliga leh si loo maareeyo xaaladaha adag ee taraafikada ee isgoysyada magaalada. Tikniyoolajiyadda noocan ah markii la hirgaliyo qiyaasta ayaa sidoo kale fure u ah suurtagelinta hawlgal aamin ah oo lagu kalsoonaan karo ee gawaarida iskiis u maamula ee magaalada oo dhan.
Nooga warran iskaashiga ka dhexeeya Nidaamyada Bentley iyo Siemens: Sidee bay iskaashigan u caawinaysaa waaxda kaabayaasha?
Nidaamka Siemens iyo Bentley Nidaamku waxay leeyihiin taariikh ah in lagu kabo boodhadh ay ku kala qoran yihiin midba midka kale shatigiisa tiknoolajiyadda si ay u bixiyaan xalalka warshadaha dijitaalka ah. Isbahaysigani waxay sii horumareen sanadka 2016 si loo helo fursado cusub oo kobcinta warshadaha iyo kaabayaasha iyada oo loo marayo isku dhafka moodooyinka injineerinka dijitaalka ah ee isugeynta ah iyo qorshayaasha maalgashiga wadajirka ah. Adigoo diiradda saaraya mataanaha dhijitaalka ah iyo khariidaynta MindSphere, isbahaysiga wuxuu adeegsadaa moodooyinka injineerinka dhijitaalka ah ee howlaha muuqaalka iyo waxqabadka hantida kaabayaasha iskuxiran ee awood u siinaya codsiyada sare sida "Kicinta sida Adeeg" xalka wareegga hantida hantida oo dhan. Tani waxay yareynaysaa guud ahaan qiimaha wareegga nolosha tan iyo markii ugu fiicnaanshaha qaabeynta, hirgelinta, iyo hawlgallada lagu gaari karo isweydaarsiga mataanaha dhijitaalka ah iyadoo hirgelinta la bilaabayo oo keliya marka ay buuxiso dhammaan rajooyinka iyo faahfaahinta. Deegaanka Muhiimka ah ee iskuxiran Macluumaadka bey'adani waxay siisaa dhamaadka-dhamaadka-hal-abuurnimo dhijitaal ah oo abuureysa mataano digital ah oo dhammaystiran oo sax ah geedi socodka iyo hanti jireed. Wadashaqayntii ugu dambeysay, labada dhinacba waxay bilaabeen Plant View to Connect, Contextualize, Xaqiiq, iyo Muuqaal Plant Data si loogu abuuro mataano dijital ah oo nool oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u ogaadaan aragtiyo cusub. Magaalada Hong Kong, xarunteena caqli galsan ee bartamaha magaalada waxay moodeysaa mowduucyo la mid ah Bentley si ay qiimo ugu abuurto macaamiisha una dardar geliso isbedelada magaalada smart.
Maxaad uga jeeddaa Isku xidhka Xalka Magaalada?
Solutions City Solutions (CCS) waxay isku daraysaa Internetka Waxyaabaha, xisaabinta daruuraha, iyo tikniyoolajiyadda isku xirka si loo taageero maaraynta magaalada ee caqliga badan loona sahlo fududeynta dadweynaha. Xogta ay soo aruuriyeen dareemayaasha iyo aaladaha caqliga leh ee isku dhafan oo ay ku shaqeyso MindSphere, xalalka magaalada ee iskuxiran waxay xayeysiisaa howlaha magaalada iyadoo awood u siineysa isku xirnaanta IoT iyo xog uruurinta iyo falanqaynta magaalada. Kororka dareemayaasha IoT ee magaalada ayaa u oggolaan kara ururinta macluumaadka deegaanka, oo ay ku jiraan nalka deegaanka, taraafikada waddooyinka, macluumaadka deegaanka oo ay ku jiraan heerkulka, qoyaan, cadaadiska, buuqa, heerka gariirka, iyo xirmooyinka la hakiyey. Xogta la soo ururiyey waxaa lagu falanqayn karaa sirdoonka macmal si loo bixiyo macluumaad ama loo saadaaliyo mustaqbalka mustaqbal ee caqabadaha kala duwan ee magaalooyinka. Tani waxay abuuri kartaa fikrado isbadal ah oo loogu talagalay qorsheeyaha magaalada si wax looga qabto caqabadaha magaalooyinka sida amniga dadweynaha, maareynta hantida, hufnaanta tamarta, iyo ciriiriga taraafikada.
Sidee ayay Siemens gacan uga geysaneysaa dhisidda beel horumarineed oo magaalada u horseedeysa iyada oo diiradda la saarayo waxbarashada?
Beesha Siemens Smart City Developmenter Community (SSCDC) waxaa la aasaasay Janaayo 24, 2019 iyada oo la balaadhinayo xarunteena caqliga badan ee casriga ah si loo adkeeyo loona kordhiyo awooda Mindsphere. SSCDC waxay kaashaneysaa la-hawlgalayaasha ganacsiga, khubarada teknolojiyada, SMEs, iyo bilowga horumarka magaalada caqliga leh iyada oo loo marayo wadaagida aqoonta, fikradaha iskaashiga, shabakadaha, iyo fursadaha iskaashiga. Waxay leedahay 4 ujeedo oo muhiim ah:
Tacliinta: Waxay bixisaa tababaro heer sare ah oo loo yaqaan 'IoT', aqoon isweydaarsiyo iskaashi iyo aqoon-isweydaarsiyo diiradda lagu saaray suuqa si loogu taageero talantiyada maxalliga ah, injineerada, cilmiga tacliinta iyo CXO sidii loo horumarin lahaa xalalka dhijitaalka ah ee la qiyaasi karo.
Shabakad: La dhiso shabakado xirfadle ah adoo sameysanaya kooxo dano gaar ah leh oo leh bilow, SMEs iyo luqado badan oo leh fursado ku wada xiriirida shirar kala duwan.
Co-Abuur: Leverage MindSphere oo ah madal khadka tooska ah ee iskaashiga lala yeesho dadka isku fikirka ah si loogu beddelo fikradaha warshadaha loona adeegsado adduunyada dhabta ah.
Shuraako: fursadaha loogu gudbin karo bilowga suurtagalka ah iyo SMEs shabakadda caalamiga ah ee bilowga iyo isku xirka warshadaha si loogu qalabeeyo xubnaha aqoonta iyo maalgashiga si kor loogu qaado xalka MindSphere.
Bulshada ayaa sidoo kale kobcisa bay'ada hal-abuurnimada leh ee shirkadaha si ay uga hortagaan carqaladeynta tikniyoolajiyada ee ay keento IoT, balaariso ganacsigooda, waxna ka qabtaan caqabadaha degdega ah ee magaalooyinka soo ifbaxaya. In ka yar hal sano, SSCDC waxay leedahay in kabadan 120 xubnood oo leh 13 dhacdo oo bulshada ah oo udhaxeeya aqoon isweydaarsiga IoT ilaa Maalinta Xalinta MindSphere, furida awooda IoT iyo abuurida wadahadalada fursadaha abuurka.
Fariin kasta oo aad rabto inaad ku siiso waaxda dhismaha / isticmaaleyaasha.
Digitalaynta waxay keenaysaa isbedelo khalkhal geliya warshado badan oo khatar ku noqon kara haddii la iloobo, laakiin waa fursad haddii la qaato. Wershadaha dhismaha ee lagu loolamaya hoos udhaca wax soo saarka iyo kordhinta kharashaadka, wareegga nolosha oo dhan ee mashruuc ayaa ka faa'iidi kara dijitalisnimada.
Tusaale ahaan, sameynta qaabaynta macluumaadka dhismahu waxay isu rogi kartaa dhismo gebi ahaanba jir ahaaneedna jir ahaan, dhismuhu wuxuu bilaabmaa ka dib marka qaan gaarku la kulmo dhammaan waxyaabaha laga filayo iyo faahfaahinta. Tan waxaa lagu wanaajin karaa MindSphere, oo awood u siineysa xog aruurinta waqtiga dhabta ah, isku-darka, iyo falanqaynta inta lagu jiro wareegga dhismaha, furitaanka fursado badan oo diirada lagu saarayo mataanaha dijitaalka ah ee mashruuca. Tani waxay sii saamaxaysaa is-dhexgalka tikniyoolajiyadaha sida soo-saarka wax-ku-oolka ah ee gacan ka geysan kara abuuritaanka qaybaha ka kooban mataanaha dhijitaalka ah si loo dardar-geliyo hirgelinta Dhismaha Isku-dhafan ee Isku-dhafan (MiC) si loo helo geedi socod dhisme oo hufan.
In la beddelo geeddi-socodka kormeerka dhismaha iyo hannaanka caddeynta, oo wali warqad ku qoran, soo-saarista tikniyoolajiyada 'blockchain technology' waxay awood u siineysaa maamulka iyo kormeerka mashaariicda dhijitaalka ah, hubinta daahfurnaanta, daacadnimada diiwaannada, iyo hagaajinta hufnaanta. Digitiation-ku wuxuu soo bandhigayaa fursado fog-fog wuxuuna beddelaa habka aan u dhisno, u wada-shaqeynno, una shaqeyno, si weyn u wanaajinaya wax soo saarka dhismaha iyo yareynta guud ahaan qiimaha mashruuca, iyadoo la abuurayo faa'iidooyin la cabbiri karo inta lagu jiro wareegga nolosha ee dhismaha. .
Siemens miyay la shaqeynaysaa shirkadaha kale sidii loo dhisi lahaa tikniyoolajiyad wax ku ool ah oo awood u siinaya abuurista / dayactirka magaalooyin caqli badan?
Siemens had iyo jeer waxay u furan tahay inay la shaqeyso shirkadaha kale mana ku koobna shirkadaha.
Siemens waxaay saxeexday xasuus isfaham waxayna sameysay xulafooyin badan Hong Kong si loo dardar geliyo horumarka magaalada caqliga leh, tusaale ahaan:
Smart City Consortium (SCC) - MindSphere waxay kuxirtaa bulshada caqliga badan ee Hong Kong si ay u muujiso sida MindSphere ugu adeegi karto madal IoT-ga magaalada.
Bangiyada Sayniska iyo Tiknoolojiyadda Xadiiqadaha ee Hong Kong (HKSTP): iskaashi deg deg ah oo lagu sameeyo xallinta khilaafaadka magaalada ee IoT iyo falanqaynta xogta
CLP: Samee mashruucyo tijaabo oo loogu talagalay korantada korantada, magaalada caqliga badan, koronto dhalinta iyo internetka.
MTR: Samee xalal dhijitaal ah oo lagu horumarinayo howlaha tareenka iyadoo loo marayo falanqaynta
VTC: Kobcinta talantiyada jiilka soo socda si loo hubiyo joogtaynta abuurista deegaanka cusub iyo keen fikradaha cusub ee hal-abuurka mustaqbalka.
Bishii Janaayo ee sannadkan, Siemens wuxuu sidoo kale ka qeybgalay Barnaamijka Scalerater GreaterBayX, oo ah iskaashi wada jir ah oo ay la leeyihiin shirkadaha bilowga ah iyo shirkadaha sida Greater Bay Ventures, HSBC, iyo Microsoft si ay gacan uga geystaan ​​kobcinta aragtidooda magaaladooda ee caqliga leh ayna uga faa'iideystaan ​​fursadaha sii kordhaya ee aagga magaalo xeebeedka leh aqoonteena domain.
Post Previous«Previous Twink Digital - Falsafad loogu talagalay kacaanka cusub ee dhijitaalka ah
Post Next Geofumadas - isbeddelada xilligan xaadirka ah ee dijitaalka ahNext »